Semalt पोइन्ट्स सामान्य कारणहरू किन ईमेल आउटरीचहरू असफल हुन्छन्
° ÐµÐ · ÑƒÐ »ÑŒÑ‚Ð ° Ñ‚Ñ‹ Ð¿ÐµÑ € ÐµÐ²Ð¾Ð´Ð °
लगभग जताततै यी दिनहरू, हामी सुन्छौं कि कसरी प्रभावकारी र आशाजनक ईमेल आउटरीचहरू हुन सक्छन्। जहाँसम्म, जब हामी यो चुनौती लिन्छौं, हामी यति धेरै असफलता र अवरोधहरूको सामना गर्दछौं जुन हामी आश्चर्यचकित गर्दछौं कि कसरी कोही सफल ईमेल आउटरीच अभियान सुरू गर्नमा सफल हुन्छ।
Semalt एक SEO र वेब प्रबन्धन कम्पनी हो जुन वेबसाइटको प्रदर्शनमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि र सबै समस्या समाधान गर्न खोज्दछ। त्यो, अवश्य पनि, ईमेल आउटरीचहरू समावेश गर्दछ। यदि तपाईंले ईमेल मार्फत तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरू सम्म पुग्न प्रयास गर्नु भएको छैन भने, तपाईंले यसलाई प्रयास गर्नु पर्छ। सही गरेपछि, यो धेरै प्रभावकारी हुन सक्छ।
कोही भन्छन् कि चिसो ईमेलहरु अनौंठो छ; राम्रो, तिनीहरू पूर्ण रूपमा गलत छैनन्। धेरैले यसलाई हिट वा मिसको खेलको रूपमा देख्दछन्, र तिनीहरूले जवाफ पाए पछि यसलाई "भाग्य" मान्दछन्। हामी सोचाइको त्यो श्रृंखला अनुसरण गर्दैनौं। चिसो ईमेलहरू खोल्ने ठूलो मौका खडा छ। तपाईको रोजगारमा रोज्नु भएको रणनीतिमा यो सबै फोकिन्छ।
यस लेखमा, हामी किन पाँचवटा सामान्य कारणहरू ईमेल आउटरीचहरू विफल हुन्छौं बताउनेछौं। तर हामीले त्यो गर्नु अघि, हामी आधारभूत कुराहरूमा जानेछौं।
यदि तपाईंले ईमेल आउटरीच प्रयास गर्नुभयो भने, सम्भावनाहरू यो हो कि तपाईंले एक दर्जन भन्दा बढि प्राप्तकर्ताहरूको लागि समान टेम्पलेट प्रयोग गर्नुभयो। धेरै पटक, हामी देख्यौं कि ग्राहकहरू जसले उही ईमेल आउटरीच टेम्प्लेटहरू अधिक प्रयोग गर्दछन्। यो सही देखिदैन, र धेरै पटक यसले ठूलो परिणामहरू दिँदैन। यसको सट्टामा, हामी के गर्छौं र तपाईंलाई सल्लाह दिन भनेको तपाईंको दर्शकहरूको खोजीमा केहि समय खर्च गर्नु हो र तपाईंले पठाउने ईमेलहरूलाई निजीकृत गर्न समय लिनु हो।
अब तपाईं धेरै जना सिधा जानुहुन्छ, तपाईको इ-मेलमा व्यक्तिगतकरणको चुटकी समावेश नगरी टाउकोमा कीलमा हिर्काउनुहोस्। तर ईमेलहरूमा गुणात्मक निजीकरणको अभाव धेरै कारणहरू ईमेल आउटरीचहरू रद्दीटोकरी फोल्डरमा समाप्त हुनुको कारण मात्र होइन।
गलत दर्शकहरूको छनौट गर्दै
ईमेल र तिनीहरूले लिने सन्देश व्यक्तिवादी हुन सक्छ। राम्रो वा नराम्रो ईमेल यसको पाठकद्वारा निर्धारित गरिन्छ। तपाईं सन्देश सब भन्दा अचम्म तरिकामा डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो रद्दीटोकरी फोल्डरमा अन्त्य हुन सक्दछ किनकि यो गलत व्यक्तिलाई पठाइएको थियो। दुःखको कुरा, यो धेरै आश्चर्यजनक ईमेल सन्देशहरूको भाग्य हो।
तपाईको इ-मेलले चाहेको नतिजा सायद प्राप्त गर्न सक्दैन किनकि तपाईले ती मानिसहरूलाई ईनबक्समा पठाउनु भएको छ जसको जिम्मेवारी तपाईको जस्तो ईमेललाई जवाफ दिन सम्मिलित छैन।
लिंक निर्माणमा हाम्रो बान्की यहाँ छ:
कसैलाई खोज्नुहोस् जो लक्ष्य कम्पनीमा लिंक निर्माणको लागि जिम्मेवार छ। वा हामी हाम्रो लक्षित कम्पनी द्वारा प्रयोग गरिएको सामग्री सिर्जना गर्न जिम्मेवार व्यक्तिलाई लक्षित गर्छौं। निस्सन्देह, यसले हामीलाई व्यक्तिहरूको सही वर्गका साथ क्रसहेयरमा राख्छ। तर किनकि त्यो लिंक निर्माणको लागि थियो, तपाईं सम्भावित ग्राहकहरूलाई ईमेल गर्न अवधारणा पनि लागू गर्न सक्नुहुनेछ।
यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले आफ्नो ईमेलहरू व्यक्तिलाई पठाउनुहोस् जसले तपाईंको उत्पादन/सेवाहरू विचार गर्दछन् र यसलाई अप्रासंगिक रूपमा अलग राख्दैनन्।
तपाईंको पिचमा गलत तर्क अनुसरण गर्दै
त्यहाँ एक ग्रीस दार्शनिक थियो जसको विद्यार्थीहरूले भाषण दिए पछि उनको प्रशंशा गरे। उनले एउटा मूल्यवान् पाठको साथ जवाफ दिए, र उनले भने कि यदि तिनीहरूले उहाँको प्रशंसा गर्नमा समय खेर फाल्यो भने, यसले उहाँसँग बाँड्नको लागि उनीहरूसँग कतै बहुमूल्य चीज रहेको कुरा देखायो। तपाईंको ईमेल आउटरीच पीचहरूमा काम गर्दा यो ज्ञान दिमागमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ।
धेरै धेरै खर्च नगर्नुहोस् ठेगानाको प्रशंसा गर्न र ईमेललाई प्रशंसाका साथ भराई, र त्यसपछि एक पक्षको लागि सोध्नुहोस्। तपाईं मात्र असाध्यै बाहिर आउनुहुनेछ, र तपाईंले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर दिनुहुने छैन, जुन हो, "तिनीहरूले यसबाट कसरी फाइदा पाउने?" यति धेरै समय र पात्रहरूको बधाई पछि, तपाइँले खोज्नु भएको पक्षलाई फर्काउन अर्थपूर्ण केहि छैन।
यसको सट्टामा, तपाइँले एक व्यक्तिगत प्रस्ताव पठाउनु पर्छ जुन तपाइँको पाठकको रुचि पक्का गर्न निश्चित छ। सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूको रूपमा, हामीले नयाँ ग्राहकहरू प्राप्त गर्ने एउटा तरिका भनेको उनीहरूको ब्लगमा गएर र सामग्री मात्र पहिचान गर्नु हो। हामी त्यसोभए तिनीहरूलाई नयाँ र अधिक सान्दर्भिक सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछौं। यसले उनीहरूलाई देखाउँदछ कि हामी केवल कुरा मात्र गर्दैनौं, तर हामी काम गर्छौं, र हामी तिनीहरूको समयको लागि लायक छौं।
टेम्प्लेटमा नाम परिवर्तन गर्दा यसलाई व्यक्तिगत बनाउँदैन
धेरै ईमेल पिचहरू उस्तै उस्तै देखिन्छन्; केवल भिन्नता भनेको नाम परिवर्तनमा हो। यो के हुन्छ जब तपाइँ तपाइँको सबै पोहोच ईमेलहरु को लागी उही टेम्पलेट मा भरोसा गर्नुहुन्छ। एक्लो नाम परिवर्तन गर्दा तपाईंको ईमेल निजीकृत छैन।
वास्तविकतामा, पिचमा एक्लै कसैको नाम थप्नु उनीहरूको ध्यानाकर्षण गर्न पर्याप्त छैन। वास्तवमा अब हामीसँग उपकरणहरू छन् जुन यी टेम्पलेटहरूमा नामहरू परिवर्तन गर्न सक्दछन्। यसैले तपाईले आफ्नो ईमेल निजीकृत गर्न को लागी अधिक तरिकाहरु खोज्नु पर्छ। पिचबक्स जस्ता उपकरणको साथ, तपाईंसँग अझै ईमेल टेम्पलेट हुन सक्छ तर साथै प्राप्तकर्ताको नाम, जियोलोकेशन समावेश गर्न, वा भर्खर भर्खरको केहि चीज उल्लेख गर्नुहोस् जुन तिनीहरू भित्र आएका छन्।
ईमेलको साथ आउटरीच सुरू गर्दै
इ-मेलको साथ तपाईंको आउटरीच सुरू गर्नु राम्रोसँग डरलाग्दो छ। यदि तपाइँ लि customer्कइनइन मार्फत सन्देश पठाउन सुरू गर्नुहुन्छ भने ग्राहक वा ग्राहकलाई जोगाउनका लागि तपाइँका प्रयासहरू अझ बढि आशाजनक हुन्छन्। यो ईमेल मार्फत पूर्ण अपरिचितसँग कुरा गर्नु भन्दा धेरै प्रभावकारी हुनेछ।
ईमेल एक निजी डोमेन को रूप मा देखिएको छ, यति धेरैले प्रत्यक्ष ईमेललाई आमन्त्रित नगरी आफ्नो निजी ठाँउमा पस्ने विचार गर्नेछन्। लिंक्डइन, अर्कोतर्फ, एक सामाजिक स्थान हो जुन नयाँ सम्बन्धहरू बनाउनको लागि अनुमति दिन्छ। लिंक्लडनमा भएका व्यक्तिहरू प्रायः नयाँ व्यक्तिहरूबाट सुन्न आशा गर्दछन्। Linkedln मा, तपाईं प्रोफाइल जाँच गर्न सक्नुहुन्छ यो निश्चित गर्नका लागि तपाईं सही व्यक्तिसँग कुरा गरिरहनु भएको छ। अर्कोतर्फ तपाईंको दर्शकहरूले तपाईंको प्रोफाइल जाँच गर्न सक्दछ तपाईंको ब्रान्डको आधारभूत ज्ञान लिनको लागि यदि तिनीहरू कनेक्ट हुन चाहन्छन् भने।
लिंक्डइन पनि साना वार्तालापहरू गर्ने उत्तम ठाउँ हो, र यो स्पष्ट रूपमा तपाईंको सम्भावनाको साथ बलियो सम्बन्ध निर्माणको शुरुआती चरणमा महत्वपूर्ण छ। लिंक्लड्नमा, तपाई व्यक्तिको चासोको बारेमा धेरै सिक्न सक्नुहुन्छ, उनीहरूको टिप्पणीहरू पढ्नुहोस् र उनीहरूको पोष्टहरू हेर्नुहोस्।
तपाईं यस जानकारीलाई एक राम्रो जग स्थापना गर्न को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
बदलामा केहि प्रदान गर्न असफल
हामीले यो उल्लेख गरेका छौं, तर हामी यो महत्त्वपूर्ण ठान्छौं कि तपाईंको ईमेल आउटरीच सफल छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्न हामी यो अंशको व्याख्या गर्छौं। व्यापार साझेदारहरू र ग्राहकहरूसँग तपाईंको सम्बन्धको मूल्य आपसी फाइदामा निर्भर गर्दछ। स्पष्ट रूपमा, यो राम्रो हुन्छ यदि सबैले निःशुल्क चीजको लागि प्रस्ताव गर्दछन्, र हुनसक्छ तपाईलाई थाहा भएको यस श्रेणीमा केही व्यक्तिहरू फिट छन्। यहाँ हाम्रो कुरा के छ सबैले उस्तै नैतिक कम्पासलाई पछ्याउँदैनन्। यदि तपाइँ ईमेल आउटरीच अभियान थाल्नु भएको थियो भने, यो लगभग निश्चित हुन्छ कि तपाइँ प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ जुन उनीहरूले बदलामा के पाउँछन् भनेर सोध्छन्। हामी नाफा कमाउने संसारमा छौं, दान होइन। बदलामा केहि प्रस्ताव राख्नुमा पाases्ग्रालाई मात्र ग्रीस पार्दैन, तर तपाईको गुणवत्ता पनि सुनिश्चित गर्दछ।
यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले आफैलाई सोध्नु होला, म के प्रस्ताव दिन सक्छु कि मलाई त्यो लिंक दिनको लागि प्रॉस्पेक्ट प्राप्त गर्न पर्याप्त प्रोत्साहन मिल्छ? के प्रस्ताव गर्ने केहि महान विचारहरु हुन्:
पुरानो सामग्री अपडेट गर्नका लागि विचार साझा गर्दै
टुटेका लाइनहरु फिक्स गर्दै
वा स्टारबक्स उपहार कार्डहरू
अर्को रणनीति उपयोगी छ कि प्रमाणित तपाइँको प्रसंस्करण को एक लिंक को सुरक्षा पछि केहि फारम पठाउन हो। यदि तपाईंसँग मिडिया गुणहरू छन् जस्तै न्यूजलेटर वा ब्लग, तपाईं आफ्नो प्रकाशन मा आफ्नो संभावना फिचर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो अतिथि पोष्टमा तिनीहरूको वेबसाइटमा फिर्ता लिंक गर्न सक्नुहुनेछ।
एक व्यवसाय सम्झौता जस्तै ईमेल आउटरीच पहुँच गर्नुहोस्
हामीले ईमेल रणनीतिहरू असफल हुनुको reasons कारणहरूबारे छलफल गरेका छौं तर आमाहरूका अन्य गल्तीहरूका कारणहरू सबैभन्दा ठूलो कारण यो हो कि तपाईंले ईमेल आउटरीचलाई व्यापार सम्झौताको रूपमा व्यवहार गर्नुहुन्न। तपाईंको पहुँच तपाईंको ग्राहकको साथ सम्बन्ध विकासको एक मात्र चरण हो। तर तपाइँको सम्पूर्ण रणनीति को सफलता तपाइँको ईमेल आउटरीच को प्रकृति द्वारा निर्धारित गरीन्छ, ती विचार गरी कि तिनीहरू कुनै पनि ग्राहकलाई तपाइँको पहिलो छाप हो।
यो दुबै राम्रो र नराम्रो चीज हुन सक्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि तपाईंले सम्भावितहरूलाई प्रभाव पार्ने यस उत्तम अवसरलाई गुमाउनु हुँदैन। किनभने यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ भने, चीजहरू छिटो नाकमा डुबाउन सक्छ।
यी सल्लाहहरू निर्माण लिंकहरू मात्र नभई तपाईंको ब्रान्डको लागि स्थायी सम्बन्धहरू बढाउने मार्गनिर्देशन हुन्। Semalt मा, हामी हाम्रो सबै कारोवारको लागि माथि सूचीबद्ध प्रविधिको प्रयोग गर्दछौं, दुबै अफलाईन र अनलाइन। हाम्रो विशाल संख्याका ग्राहकहरुमा हेर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस् कि जब हामी सुरु गर्छौं, हामी कसैलाई पनि हाम्रो दिशामा हेर्न गाह्रो लाग्छ। हामीले साँढेलाई यसको सि horn द्वारा लिनुपर्‍यो र हाम्रा ग्राहकहरूतर्फ चार्ज गर्नुपर्‍यो।
यदि सही गरिएमा ईमेल मार्केटिंग धेरै उत्पादक हुन सक्छ। हाम्रो मद्दत र को सेवा को साथ हाम्रो समूह, Semalt ले तपाईंलाई विजयको मार्गमा मार्गदर्शन गर्न सक्दछ। यदि हामी यसलाई बनाउन सक्दछौं, तपाईं पनि सक्नुहुन्छ। यो सबै कुरा निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले यो सही तरिकाले गर्नुभयो।